Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Turkiga oo Qabsaday Tuulooyin Ka Tirsan Suuriya.
Ciidanka Turkiga oo Qabsaday Tuulooyin Ka Tirsan Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ January 23, 2018
Ciidamada Turkiga ayaa qabsaday dhowr tuulo oo ku yaalla Waqooyiga dalka Suuriya, sida ay ku warrantay warbaahinta dalka Turkiga.
Wadanka Turkiga ayaa maalinkii saddexaad waxay wadaan duullaan ka dhan ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka taliya Waqooyiga dalka Suuriya. Ciidamadda Turkiga oo ay weheliyaan mucaaradka Suuriya ee ay iskaashiga leeyihiin ayaa la sheegay in ay la wareegeen maanta dhowr goob oo ka tirsan gobolka Afrin.
Dowladda Turkiga ayaa u aragta maleeshiyaadka Kuridiyiinta ee YPG koox argagixiso ah. Jabhada YPG, oo gacanta ku haya inta badan wuqooyi bari Suuriya ayay Turkiga u arkaan in ay yihiin jabhadda PKK oo la sii balaariyay .
Kooxda YPG waxay beeniyeen in ay xidhiidh toos ah la leeyihiin PKK, waxa ayna maleeshiyaadkan qayb muhim ah ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Daacish. Xukuumadda Ankara ayaa cambaareysay in Mareykanku uu taageeraay maleeshiyaadka YPG.